घर घरेडी बेचेर मनग्या पैसा कमाउनेका सपना सपनामै सिमित हुदै, यस्तो नियम ल्याउदै छ सरकारले - Eall Nepal
घर घरेडी बेचेर मनग्या पैसा कमाउनेका सपना सपनामै सिमित हुदै, यस्तो नियम ल्याउदै छ सरकारले
तपाई राजधानीमा घडेरी किन्दै हुनुहुन्छ ? राम्रो घडेरी नपाएर किन्न पाउनु भएको छैन ? घडेरी किन्न दलालको चंगुलमा फस्नु भएको छ ? अब चिन्ता नलिनुस मनोहरा जग्गा एकिकरण आयोजनाले न्युनतम १६ लाखदेखि २४ लाख रुपैयाँमा तपाईले चाहेको जस्तै घडेरी बिक्री खुला गरेको छ ।
आयोजनाले सरकारी दरमै घडेरी बिक्री खुला गरेको हो । घडेरी किन्न चाहानेले ३५ दिनभित्र बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने छ । कुल कवोल अंकको १० प्रतिशत रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ अन्तर्गत पर्ने ४४ आनाको १४ वटा घडेरीहरु बिक्री गर्न लागेको हो ।
बिक्री गर्न लागेको १४ कित्ता घडेरीमध्ये सबैभन्दा महंगो दक्षिण पश्चिम मोहडा फर्किएकोे प्लट नं ४६ रहको छ । २.९७९ आना रहेको सो घडेरीको न्युनतम मूल्य २४ लाख २१ हजार तोकेको छ । यस्तै सबैभन्दा सस्तो प्लट नम्बर १०९ र १०८ को न्युनतम मुल्य १६ लाख ८ हजार रहको छ ।
आयोजनाले काठमाडौं र भक्तपुरमा पर्ने २ हजार २०० रोपनीलाई प्लानिङ गरी घडेरीहरु बिक्री गर्न लागेको हो । यसैगरी प्लट नम्बर २२, २७, २९, ३२, ३६, ४४, ४५, को न्युनतम मूल्य १८ लाख २३ हजार प्रतिआना तोकेको छ । यस्तै प्लट नम्बर ५० र १०७ को २२ लाख ५२ हजार, प्लट नम्बर २९ र ११५ को न्युनतम मूल्य १९ लाख ३२ हजार तोकेको छ ।१४ वटा घडेरीहरु टेण्डर प्रक्रियाबाट बेच्न लागिएको आयोजना प्रमुख नारायण भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार घडेरी व्यक्ति, संस्था जो कोहिले किन्न सक्नेछन् । घडेरी खरिद गर्नका लागि ग्राहकले पहिले नै न्युनतम रकमको १० प्रतिशत रकम बुझाउने पर्नेछ । बैंकमा रकम बुझाएपछि आफुले घडेरीलाई तिर्न सक्ने जति रकम कवोल गरी टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिनु पर्नेछ ।
बिक्री गर्न लागिएका सबै घडेरीहरु व्यक्तिको रहेको आयोजना प्रमुख भट्टराइले जानकारी दिए । यसरी बेचिने घडेरीहरुमा ग्राभेल सडक, नदि नियन्त्रण, ढल व्यवस्थापन लगायतको सुविधा हुनेछ ।
आयोजनाका अनुसार घडेरी बिक्री भएको ४ प्रतिशत रकम सोहि प्लानिङको पुर्वाधारमा खर्च गरीनेछ । आयोजनाले विभिन्न स्थानका २ हजार २०० सय रोपनी जग्गााई विकास गरी बेच्दै आइरहको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले पनि काभ्रेको धुलिखेल लगायत देशका विभिन्न ठाँउमा जग्गा विकास गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घरजग्गा कारोबारलाई अब मान्यता प्राप्त संस्थाबाट मात्रै कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरेपछि सरकारी संस्थाबाट कारोबार सुरु भएको हाे । घरजग्गा कारोबार राष्ट्रिय आवास कम्पनी, मनोहरा जग्गा एकिकरण आयोजना, चमती जग्गा एकिकरण आयोजनाले सुरु गरेको हो। –विकासन्युजबाट
कार, जीप, भ्यान, मोटरसाकल, स्कुटरको सवारीचालक अनुमति पत्रको लिखित परिक्षा हुने सम्बन्धी यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीको अत्यान्त जरुरी सुचना !!
होसियार ! हरियो धनियाँ गलत तरिकाले सेवन गरेमा ज्यान पनि जान सक्छ : कसरी सेवन गर्ने त ?